'Breath Play' aka Strangulation oo si dhakhso leh kor ugu kacaysa - Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Blog 'Breath Play' aka Strangulation oo si dhakhso leh u socota
Waxay ahayd wax naxdin leh markii aan maqlay gabadh yar oo 14 jir ah oo iskuul dhigata oo noogu dhawaaqaysa inay tahay "qof jilicsan". Waxaan hor joognay 20 kale oo dhalinyaro ah oo kahadlaya halista ka imaankarta lebbiska internetka. Taasi waxay horey u jirtay seddex sano ka hor. 'Neefsashada ciyaarta' ama 'ciyaarta hawada' waa suuragal in la dilo. Warshadaha lulataaye iyo khubaradooda ayaa dib-u-magacaw ku sameeyay ceejin aan dil lahayn sidaa darteed waxay u egtahay amaan iyo baashaal.
Nasiib darro, kiisaska sida Grace Millane, “Ciyaarta neefta” ayaa aad u fog. Grace waxay ahayd boorsada boorsada Ingiriiska ee New Zealand. Wiil dhalinyaro ah oo ay dhawaan uun kula kulantay khadka tooska ah ayaa si xun ugu ceejiyey faraxumeyn galmo. Way ka fogtahay marka laga reebo. Waa ciyaar qabow, isboorti jinsi galmo ah oo loogu talagalay dhalinyarada maanta.
Maqaal aad u wanaagsan oo ay qortay Louise Perry ee majaladda istaagida, waxaan ka baranaynaa wax cusub cilmi waxaa qoray Dr Helen Bichard. Dr Bichard waa dhakhtar ka shaqeeya Adeegga Dhaawaca Maskaxda Waqooyiga Wales. Waxay ka hadlaysaa “dhaawacyo kala duwan oo ay sababeen ceejinta aan dhimashada lahayn oo ay ku jiri karaan wadnaha oo istaaga, istaroog, dhicis, saxarada oo haysa, cilladaha hadalka, qallalka, curyaannimada, iyo noocyada kale ee dhaawaca maskaxda muddada dheer.” Dr Bichard oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi "dhaawacyada ka dhashay ceejinta aan dhimashada lahayn waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan isha qaawan, ama waxay noqon kartaa oo kaliya saacado ama maalmo kadib weerarka, taasoo la micno ah inay aad uga yar yihiin dhaawacyada sida dhaawacyada ama jabka lafaha, sidaas darteedna waa la waayi karaa inta lagu guda jiro baaritaanka booliska.
Qaab-dhismeedka muhiimka ah ee u nugul ceejinta (Bichard et al., 2020)
Ragga ceejinta dumarka
Shisheeyaha ayaa si xoog leh ragga ugu geysta dumarka. Waxay ku sii kordheysaa kiisaska rabshadaha qoyska. New Zealand waxay soo bandhigtay dambi ciqaab ah oo ku saabsan Dhibaatada Galmada Aan Dhiman ee 2018. Laga soo bilaabo Janaayo ilaa Juunyo 2019 in ka badan 700 oo dacwadood ayaa laga soo sheegay New Zealand, ilaa 4 maalintii.
Xildhibaanka Harriet Harman oo ay weheliyaan xildhibaano kale ayaa isku dayaya inay mamnuucaan 'dilka xun' ee difaaca sharciga ee Sharciga Xadgudubka Guriga. Brexit iyo hadda Covid-19 ayaa dib u dhigay marinka Hindise Sharciyeedka ee loo mariyey Baarlamaanka. Qaarkood waxay ugu yeeraan difaaca "50 Shades of Grey" ee dilka inta lagu guda jiro galmada. Harmann loo yaqaan dib bishii Abriil 2020 "si loo joojiyo caddaalad darradan" difaaca ciyaarta galmada taas oo macnaheedu yahay in nin qirtay inuu sababay dhaawacyo haween ah "si macno leh ula baxsado dil".
Waa inaan ka feejignaano sida dhaqanku u qalloocinayo habdhaqanka galmada, gaar ahaan dhalinyarada, adoo soo jiidanaaya rabshado la oggol yahay oo ka dhan ah lamaanayaasha galmada iyadoo aan la helin aragti dheelitiran oo ku saabsan khataraha dhabta ah ee ku lug leh.
Sida laga soo xigtay a Sahanka jimicsiga Sunday Times ee 2019 ku saabsan sida sawir-gacmeedka internetka uu u beddelayo dabeecadaha galmada, laba-jibbaar dumarka da'da yar ee ragga ah ee ku jira Gen Z ayaa ku qiimeeyay BDSM iyo jinsi qallafsan sida noocyada ay jecel yihiin ee porno.
Cusboonaysii 11 Nofeembar 2020: Halkan waxaa ah maqaal ka soo baxay Guardian oo ku saabsan Ciyaaraha galmada ayaa khaldamay.